Kompany oo ka hadlay cunsuriyad lagula kacay laba Cayaartooy oo ka cayaara England iyo Italy – Walaal24 Newss
Vincent Kompany ayaa sheegay “cunsurin aan la aqbali karin” iney tahay, dhawaan cunsuriyada ee loogu talagalay ciyaartoyda England iyo Italy ka cayaarta.
Kabtanka Manchester City ayaa aaminsan “siyaasiyiinta soo doortay” inay sameeyeen tilmaanta ku saabsan xadgudubka loo geystay saaxiibkiisa ay isku kooxda yihiin Raheem Sterling ee Stamford Bridge iyo Kalidou Koulibaly oo ku yaala San Siro.
Kompany ayaa ku soo qoray boggiisa Twitter: “Really!” Koulibaly cunsuriyad ku ah San Siro, Raheem Sterling oo ka tirsan Stamford Bridge .. Tani waa wax aan la aqbali karin!
“Siyaasiyiin la soo doorto ayaa dhigay habdhaqanka luuqada kala duwan, lakiin qaar ka mid ah sababaha waa inay soo laabtaan!” Ixtiraam Ancelotti iyo saaxiibadiisa Napoli ee ciyaarta ka dib.
Dhacdooyinkaas labadoodaba dhacay bishii lasoo dhaafay, sheegashada Sterling ee ku saabsan xadgudubka cunsuriyada ayaa dhacday xilli City ay guuldarro 2-0 ah kala kulantay Chelsea 8 December, halka Koulibaly ay ku eedeysay Napoli inay guuldarro 1-0 ah ka soo gaartay Inter maalintii Boxing Day.
Koulibaly ayaa casaan la siiyay intii lagu jiray ciyaarta, waxaana tababaraha Napoli Carlo Ancelotti uu sheegay ka dib inuu ciyaari doono ciyaartoydiisa si ay u joojiyaan ciyaarta haddii ay jiraan cunsurinimo cunsuriyadeed oo socda.
Wasiirka arrimaha gudaha DFS oo shaagey inay bilaaban doonto soo xulista Baarlamanka labaad ee KGS
taariikh nololeedkiisa madaxweynaha cusub maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya
Daawo: Xasan Sheekh Madaxweynihii hore oo loo doortay Hogaamiye Xisbi